सरकारले दिर्घकालिन र अल्पकालिन योजनामा ध्यान दियोस् ः अर्थ विद् « Sahakari Nepal
सरकारले दिर्घकालिन र अल्पकालिन योजनामा ध्यान दियोस् ः अर्थ विद्
प्रकाशित मिति : 29 May, 2015 10:23 am
काठमाडौं । महाभूकम्पका कारणले तहनहस भएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सरकारले दीर्घकालिन योजनाहरु ल्याउनु पर्नेमा अर्थ्विदहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को शुक्रवार राजधानीको मिडिया इन्टरनेसनलमा भएको तेस्रो महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थ्विदहरुले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी पुननिर्माणभन्दा दीर्घकालिन योजनामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
लबाष्वसोही कार्यक्रममा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले दीर्घकालिन रुपमै पुनर्निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने बताए । तत्कालका लागि लागि जेजस्तो काम गरिए पनि दीर्घकालिन योजनाहरु ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । दाताहरुले नेपालको ठूलो सहयोग गर्न चाहे पनि सरकारको ब्यवस्थापकीय क्षमता र इमान्दारिताप्रति शशंकित बनेको क्षेत्रीले बताए । भूकम्पका कारण मात्र नभई जुनसुकै दैवीप्रकोपमा पनि जोखिमपूर्ण अवस्था रहेकाले दैवी प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न छुट्टै ब्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
पूर्व गभर्नरसमेत रहेका क्षेत्रीले सरकारले गर्न लागेको दाताको सम्मेलनले नेपालको छविमा आाच आउने भन्दै दाताहरुलाई नेपाल भनेको सधौ माग्ने देशका रुपमा चित्रित नगराउन आग्रह गरे । बाहिरबाट आएको स्रोतमा ऋण अनुदान मात्र नहुने उनको भनाई थियो ।
अर्थ्विद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले भूकम्पले आघात पुर्याएको नेपाललाई फाष्ट ट्रयाक विधिबाट निर्णय गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए । अन्तरपार्टी समझदारी कायम गरी फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्न उनले सुझाए । सरकारले हाल ल्याइरहेको योजनाहरु क्षणीक र टालटुले भएको टिप्पणी गर्दै प्याकुरेलले यस्ता योजनाहरुले दिगो आर्थिक विकास नहुने दावी गरे ।
सरकारको इच्छा शक्ति र वित्तीय ब्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनले बताए । अल्पकालिक योजना तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार चुकेको उनको आरोप थियो । नेपालमा लगानी गरेर आफू असुरक्षित भएको महशुश गर्ने वातावरण बन्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा अर्का अर्थ्विद् डा. दिल्लीराज खनालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक दलहरुले घिसार्दै ल्याइरहेकाले भूकम्पपछिको अर्थतन्त्र कसरी लैजाने भन्ने विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरु अल्मलिरहेको आरोप लगाए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को चौथो बार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो महासभाबाट नया कार्यसमिति चयन भएको छ । नाफिजको तेस्रो महासभाबाट सर्वसम्मत निर्वाचीत हुनेहरुमा अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र सापकोटा, उपाध्यक्ष राजाराम कार्की,किरण मरहठ्ठा, महासचिव ईन्द्र बाँनिया, सचिव अमृत राज काफ्ले ,सहसचिव चन्दा कार्की, कोषाध्यक्ष महेश घिमिर,े सदस्यहरु कृष्ण किसी,माधव निर्दोष,अनिता आचार्य,सिताराम भटट्राई,नारायण पंगेनी, मेनुका कार्की,ज्ञान प्रसाद बास्तोला,सुमन शर्मा,अर्जुन पन्त,फणिन्द्र दाहाल र सृजना तिमिल्सिनाको १९ सदस्यीय कार्य समिति चयन भएको छ ।
कार्यक्रमा नवनिर्वाचीत अध्यक्ष सापकोटाले नेपालका आर्थिक पत्रकारीताको मध्यमबाट सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आर्थिक मूद्दामा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै अव आर्थिक पत्रकारीतालाई व्यवसायीक र मर्यादित बनाउन एउटै संगठन निर्माणको अभियानमा नाफिज लाग्ने बताउनु भएको छ ।